KENYA:Sarkaal Katirsan Booliska Kenya Oo lala'yahay Kadib Weerar Ka Dhacay Gobolka Waqooyi Bari.
Thursday November 09, 2017 - 10:22:36 in Wararka by Super Admin
Warbaahinta Maxalliga Kenya ayaa sheegaysa in sarkaal sare oo katirsan ciidanka Booliska lagu la'yahay duleedka Mandheera.
sawir hore gaari lagu gubay duleedka Mandhera
Shabakad lagu magacaabo STAR oo laga leeyahay dalka Kenya oo soo xiganeysa Saraakiil ka tirsan ciidamada Police-ka ayaa sheegtay in la la’yahay Sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya oo ka mid ahaa askar todobaadkan gudahiisa ay Al Shabaab ku weerareen duleedka magaalada Mandheera ee gobolka NFD ama waqooyi bari.
Shabakadan ayaa sheegtay in weerarkan lagu gubay laba gaari oo ah kuwa ay isticmaalaan ciidamada Police-ka ka dib markii la weeraray iyagoo galbinaya gaari Bas ah oo ay la socdeen dad nasaaro ah oo ka soo ambabaxay magaalada Mandheera kuna sii jeeday magaalada Nairobi.
Waxay sheegtay in gaadiidka lala helay garneellada garbaha laga tuuro, ayna gabi ahaanba halkaas ku burbureen, Sarkaal diiday in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa Shabakadan u sheegay in lagu dabajiro askariga maqan islamarkaana loo maleynayo in uu ku dhuumaaleysanayo deegaanada Howdka ee u dhow halka uu weerarku ka dhacay.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkan waxayna xaqiijisay in weerarkaas lagu gubay laba gaari laguna dilay askar dhowr ah oo ka mid ah cadowga.
Qaar ka mid ah warbaahinada dalka Kenya ayaa iyagana qiray in weerarkaas lagu dilay ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya, laguna dhaawacay tiro kale.
Ku Dhawaad 100 askari oo ka tirsan ciidamada Police-ka Kenya ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay lagu dilay weerarada dhabagalka ah iyo qaraxyada mujaahidiintu ku beegsanayaan ciidamada Police-ka ee ka howlgala gobolada Lamu iyo NFD ee waqooyi-bari.